सावधान ! चुरोटले सोच्ने शक्ति कमजोर बनाउँछ ! – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२३ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ००:२२ English
सावधान ! चुरोटले सोच्ने शक्ति कमजोर बनाउँछ !
काठमाडौं । चुरोट पिउनेले जति सक्दो चाँडो आफ्नो आदत त्यागेमा यसअघि चुरोटले दिमागमा पारेको क्षतिबाट बच्न सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका छन् । दिमागको शक्तिलाई पूर्ववत् अवस्थामा राख्न ७० वर्षपछि पनि चुरोट रोक्न सकिने उनीहरुको सुझाव छ ।
युनिभर्सिटी अफ इडनबर्कका वैज्ञानिकहरुले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ अनुसन्धानअनुसार चुरोटले दिमागको बाहिरी पत्रलाई पातलो बनाउँछ । वृद्धावस्थासँगै दिमागको पत्र पातलो हुँदै जानु स्वाभाविक हो । तर चुरोट पिउने मानिसहरुको दिमागी पत्र भने उनीहरुको लतअनुसार युवावस्थामै पातलो हुन्छ । स्मरण, ध्यान, सचेतना आदिको निर्माण हुने क्षेत्र दिमागको सेरिब्रल कोर्टेक्सममा चुरोटले प्रत्यक्ष असर पार्छ ।
१० माघ २०७२, आईतवार ०१:३४ मा प्रकाशित